एक हल गोरुबाट ५० घर उज्यालो | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-05-22T04:36:23.500544+05:45
एक हल गोरुबाट ५० घर उज्यालो
personदीपेन्द्र राई access_timeअसार १५, २०७४ chat_bubble_outline1
एक हल गोरुबाट ५० घर उज्यालो बनाउन सकिन्छ ।
सुन्दा अचम्म लाग्ला । व्यावहारिक पक्ष थाहा पाउँदै गएपछि विश्वास गर्न करै लाग्छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज मेकानिकल इन्जिनियरिङ उपप्रशिक्षक रमेश चौधरीले सुनाए, ‘प्रत्येक घरमा चार÷चारवटा बत्तीमात्रै बाल्ने हो भने एक हल गोरुबाट उत्पादित विद्युत्ले ५० घर उज्यालो बनाउन सम्भव छ ।’
एक हल गोरुबाट दुई किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यति विद्युत्बाट एलईडी प्रयोग गरेर ५० घरलाई तीन घन्टा उज्यालो बनाउन सकिने चौधरीले बताए । चौबीसै घन्टा बिजुली बाल्ने हो भने तीन हल गोरु चाहिन्छ । उनका अनुसार साधारण संयन्त्र जोडजाड पारेर गोरुबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
‘गोरुबाट विद्युत् उत्पादन गर्नु अनौठो काम होइन,’ चौधरीले प्रस्ट्याए, ‘गोरुले दाइँ गरेको तपाईं÷हामीले देखेकै हो । गोरुको मेकानिकल इनर्जी उसको फिजिकल बिहेबियरबाट आउँछ त्यसलाई सदुपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने हो ।’
त्यसो भए गोरुबाट विद्युत् उत्पादन गर्न के/के चाहिएला ?
सर्वप्रथम गोरु चाहिन्छ । त्यसपछि जुवा । गोरुलाई घुमाउन मियो चाहियो । मेकानिकल इजर्नीलाई इलेक्ट्रिकल कन्भर्सन गर्ने जेनेटरसमेत चाहिन्छ । त्यो एसी वा डीसी पनि हुन सक्छ ।
मियोवरिपरि घुम्ने गोरुको भेलोसिटी अथवा आरपीएम (रिभोलुसन पर मिनेट) जेनेरेटरसँग म्याच गर्ने कुनै चीज राखिन्छ । किनकि गोरु कम गतिमा हिँडे पनि जेनेरेटर घुमाए पुग्छ । तर, गोरु बसिहाल्यो भने के गर्ने ? उनले भने, ‘त्यसका लागि बफरिङ मेकानिजम डेभलप गर्न सकिन्छ । कम गतिमा गोरु हिँडे पनि मेकानिकल इजर्नी डेभलप भइरहेको हुन्छ । भोल्टेज फ्लक्चुएसन, बत्ती नबल्ने अवस्था हटाउने फ्याक्टर नै मेन च्यालेन्जिङ हो । गोरु हिँड्दा बत्ती दिन्छ, नहिँड्दा पनि केही समय बत्ती बल्ने सिष्टम हुनुपर्छ ।’
गोरुलाई हिँडिरहने बनाउने उपाय पनि त होला ?
‘छ नि,’ उनको तर्क छ, ‘जुवामै केही घाँस झुन्ड्याइदिने । जुवामा झुन्ड्याइएको घाँस खान गोरुले हिँड्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको हुन्छ । घाँस हुँदाहुँदा पनि कहिलेकाहीं गोरु नहिँड्न सक्छ । त्यतिबेला भोल्टेज कम भएको थाहा पाइने मेकानिजम हुन्छ । भोल्टेज कम हुनबित्तिकै छडीले दुई÷तीनपटक चोट नलाग्नेगरी गोरुलाई पिट्छ । छडीको पिटाइले समेत भोल्टेज मेन्टेन हुन्छ ।’
बत्तीचाहिँ कसरी बल्छ त ?
जेनेरेटरमाथि गियरबक्स हुन्छ । त्योमाथि मेकानिकल बफरिङ (थोरै समयका लागि इनर्जी कलेक्ट गर्ने क्वायल स्प्रिङ) हुन्छ । मेकानिकल बफरिङ गियरबक्समाथि जोडिन्छ । गोरुबाट आएको इनर्जी बफरले लिन्छ । त्यसपछि गियरबक्सले । गियरबक्सले आरपीएम (रिभोलुसन पर मिनेट) मिलाएर जेनेरेटरलाई दिन्छ । जेनेरेटरले बत्ती बाल्छ ।
यो प्रविधिबाट उत्पादित बत्ती टाढाटाढा पुर्याउन ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ । तर, विनाट्रान्सफर्मर टोलटोल वा एउटै गाउँमा विनास्वीचको बत्ती बाल्न सकिन्छ । सामूहिक रूपमा चलाउँदा यो प्रविधि खर्चिलो पनि छैन । सम्भव पनि छ । जेनेरेटर चलिन्जेल बत्ती बलिरहन्छ ।
‘गोरुबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्दा कतिले अभिरुचिपूर्वक सोधखोज गर्थे,’ चौधरीले अतीत सुनाए, ‘कतिले हाँसिदिन्थे । कतिले व्यावहारिक समस्या ठान्थे । यसका लागि व्यवहारिक समस्या छैन । तर, मागचाहिँ हुनुपर्यो ।’
बिजुलीबत्ती नपुगेको ठाउँमा यो प्रविधि प्रभावकारी मानिन्छ । सर्वप्रथम गोरु हुनुपर्यो । त्यसपछि आवश्यकता । बिजुली नपुगेको ठाउँमा आवश्यकता भइहाल्छ । यो प्रविधिलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाउन पाए प्रभावकारी हुने भन्दै चौधरीले सुझाए,
‘सम्बन्धित नियकायले बत्ती आवश्यक भएको ठाउँ पहिचान गरिदिनुपर्यो । अहिले त यो सम्भव देखिएको छ । तर, यसले साइड इफेक्ट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर पाइलटिङ गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । फिडब्याक पाएपछि मात्रै साइड इफेक्ट थाहा पाइन्छ । अहिलेको समस्या भनेको गोरु हिँडेन भने हिँडिरहने कसरी बनाउने भन्नेमात्रै हो ।’
भारतमा बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले झन्डै डेढ वर्षदेखि गोरुबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ‘बुल पावर’ योजना अघिसारेका छन् । तर, बारागढी गाउँपालिका–१ बारानिवासी चौधरीले गोरुबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर ‘गोरुबत्ती’ का नाममा संवत् २०६५ चैत ९ गते उद्योग मन्त्रालयमा मौलिक अधिकार सुरक्षित (प्याटेन्ट राइट) का निवेदन दिएका थिए ।
गोरुमात्रै होइन, राँगा, खच्चड, गधा, गाई र साँढेबाट पनि यही प्रविधिअनुसार विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ३० प्रतिशत नेपाली विद्युत्बाट वञ्चित छन् । विद्युत्बाट वञ्चितलाई यो प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सिकाउने हो भने रमेश चौधरीको सपना पूरा हुने थियो ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको चमेना गृहबाहिर ‘गोरुबत्ती’ बारे कुराकानी बिट मार्दै गर्दा उनी मज्जाले हाँसे ।
July 1, 2017, 8:22 p.m. मधु सुदन
बिचारा गाेरू र हाम्राे इन्जिनियरिङ बुद्दि ।